LOT Polish Airlines dia mamerina ny serivisy Seoul avy amin'ny seranam-piaramanidina Budapest
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » LOT Polish Airlines dia mamerina ny serivisy Seoul avy amin'ny seranam-piaramanidina Budapest
Seranam-piaramanidina Budapest dia nanatri-maso ny famerenana ny serivisiny fanatobiana entana maharitra voalohany androany satria nijanona ny faritra maro manerantany nandritra ny Covid-19 valan'aretina. Nesorina ny fameperana ny fivezivezena eo amin'i Hongria sy Korea, LOT Poloney Airlines'Ny fandidiana isan-kerinandro any Seoul Incheon dia niverina indray hamaly ny fangatahana be loatra amin'ny fifandraisana manan-danja eo amin'ny Budapest sy ny Atsinanana.
Satria ny tsena teo anelanelan'ny vavahady Hongroà sy ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Korea Atsimo dia nahatratra mpandeha efa ho 100,000 tamin'ny taona 2019 - nandrakitra fitomboana 100% hatramin'ny 2016 - ny serivisy mitondra ny sainam-pirenena dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiverenan'ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny firenena roa tonta. Ny fampitomboana ny habetsahan'ny fifamoivoizana an'habakabaka an-tanàna hatramin'ny 50% tamin'ny ririnina lasa teo, ny asan'ny LOT dia ho mpilalao fototra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fampiasam-bola anatiny avy any Korea mankany Hongria.
“Rehefa nandefa ny fifandraisana manan-danja LOT teo anelanelan'ny Budapest sy Seoul izahay tamin'ny septambra lasa teo, dia namorona tantara iray mahomby. Androany dia tsy manamarika ny fiverenan'ny serivisy lavitra any Budapest ihany, fa ny fiverenan'ny fahatokisana ny seranam-piaramanidintsika sy ny fitsangatsanganan'ny rivotra ihany koa », hoy ny fanazavan'i Balázs Bogáts, Lehiben'ny fampandrosoana Airline, seranam-piaramanidina Budapest. "Ny fisarihana fifangaroana mifandanja amin'ny fandraharahana, fialam-boly ary mpandeha VFR, LOT dia niaina anton-javatra betsaka nandritra ny vanim-potoana ririnina farany. Satria ny fangatahana amin'ny ho avy dia efa nanondro ny filàna fampitomboana ny fahaiza-manao, dia tsy isalasalana fa ny làlana dia hanatontosa vokatra lehibe mitovy amin'izany. "
Tamin'ity taona ity, ho an'ny seranam-piara-manidina rehetra, ny valanaretina COVID-19 manerantany dia nisy akony lehibe tany Budapest fa, rehefa manomboka manangana ny fifamoivoizan'ny mpandeha ny vavahady, ny famerenana ireo zotra marobe toa ny fifandraisan'ny LOT mankany Seoul dia fampandrosoana lehibe handresena ny fidinan'ny fidinana.
Costa Rica dia nanendry ny minisitry ny fizahantany vaovao